Antivirus uninstallers collection ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Antivirus Softwares , Antivirus Tools , Audio Tools , Internet Tools » Antivirus uninstallers collection
By သန့်ဇင်ဌေး7:51 AM11 comments
ကျွန်တော် ဒီနေ့ လက်ဆောင်လေး တစ်ခု ထပ်ပေးမယ်ဗျ။ ယူချင်လားတော့ မသိဘူး။ အဆင်ပြေဖို့တွက် collection လုပ်ထားတာ။ တော်တော်များများ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ error တွေထဲ့မှာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ အထဲ့မှာပါတဲ့ antivirus တင်ပြီး ပြန်ဖြုတ်လို့မရတာတို့ Registry မှာ ကျန်နေလို့ error ခဏခဏ တက်တာတို့ ကြားဘူးတွေ့ဘူးကြတယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ်နော် အဲ့ Error က ချွေးပြန်တယ်။ မသိရင် ဘယ်က အစ ရှာရမှန်းမသိဘူး။ ဥပမာ AVG လို Antivirus တင်ပြီး ပြန်ဖြုတ် KIS ကို တင်ကြည့်။ Error တွေ တက်နေရော.. ဒီပြင် ဆော့ဝဲသွင်းရင်လည်း ပြသနာ ရှာနေပြန်ရော ။ ဒီအတွက် ဘာ error မှ မတက်ပဲ့ ပြန်ဖြုတ်လို့ ရတဲ့ Antivirus Uninstaller တွေပေးမယ်။
ကိုယ့်စက်မှာ AVG Antivirus ကို သုံးပြီး ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က ဒေါင်းလို့ ချလို့ရလာတဲ့ ဖိုင်ထဲ့က AVG uninstaller ကို သုံးပြီး ဖြုတ်ပေါ့။ Antivirus တိုင်းတွက်ပါတယ်နော်။ အကုန်လုံးပါပဲ့။ လိုတာကို ဆောင်ထားနိုင်အောင် စုစည်းပေးထားတာပါ။နောက်ထပ် ပိုစ့်တွက် ပြင်ဆင်ထားတာကတော့ The Best Uninstallers ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပိုစ့်မှာ တက်လာပါမယ်။ ခုကတော့ Antivirus Uninstallers တွေပါ။
ပါဝင်တဲ့ Antivirus Uninstaller တွေ Lists ကို ကြည့်ပါ။
AVG Remover (x32) 10.0.0.1322
AVG Remover (x64) 10.0.0.1322
BitDefender Uninstall Tool 1.0.14.5
CA Anti -Spam 2007/2008 uninstall Utility
CA Anti -Spyware 2007/2008 Uninstall Utility
CA Anti -Virus Uninstall Utility
F -PROT Version 3.x Remover 1.0.0.475
F -PROT Version 6.x Remover 1.0.5.1
F -Secure Uninstallation Tool 3.0.890
Max AntiVirus Uninstaller (x32) v1.0.0.1
Max AntiVirus Uninstaller (x64) v1.0.0.1
Microsoft Security Essentials 1.0 Uninstaller (Microsoft Fix it 50 535) 2.1.3.16
Microsoft Security Essentials2Uninstaller (Microsoft Fix it 50 692) 2.1.3.4
nProtect Security Platform 2007 Remover 2.0.78.0 (090 921)
QuickHeal 10.0 Removal Tool (2004.10.02)
QuickHeal 11.0 Removal Tool (x32) (2010.01.18)
QuickHeal 11.0 Removal Tool (x64) (2010.01.18)
ဒီလောက်ဆို Uninstallation လုပ်လို့ မရတဲ့ Antivirus တွေ တွက် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့တွက်ကတော့ အောက်က လင့်မှာ သွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျွန်တော် ပြည်တော်ပြန်ဖို့ ပိုစ့်တခုမှာ စရေးခဲ့တာ တွေ့တော့ အောက်က ကော့်မတ်မှာ တွေ့ဆုံပွဲကိုလာမယ်လို့ ပြောသွားတာရှိပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲကို လာမယ့်သူတိုင်း မိမိတို့ အလိုရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို မေးလ်ပို့ပြီး 10 Gb ထိ ယူလာပေးမယ်ဆိုတာ အသိပေးပိုစ့်တက်ပါဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ပေါင်း Gb 7000 လောက် ပါလာမှာပါ။ အဲ့အတွက် လူ အယောက် ၂၀၀ စာ Gb ၂၀၀၀ ကိုတော့ တစ်ယောက် 10 gb ဆီ ပေးဖို့ ပြင်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းပြောသွားတာပါ။ အချောပိုစ့် တပိုစ်တက်ပါမယ်။ မြန်မာ မိသားစုမှာရော . ဒီဆိုဒ်မှာရော IT.Dev မှာရော ကျွန်တော်ပိုစ့်တက်ပြီး စားရင်းကောက်ပြီး Gb 2000 စာ ယူလာခဲ့ပေးမယ်ဆိုတာကို ကြော်ငြာပေးမှာပါ။ လိုချင်တာတွေကို ကြိုပြီး ဆုထားနိုင်အောင် ဒီပိုစ်ဖတ်သူတွေသိအောင် တိတ်တိတ်လေး ကြိတ်ပြီး အရင် အသိပေးတာပါ။ ၆ လပိုင်း သို့မဟုတ် ၇ လပိုင်း ပြန်လာမှာပါ။
sainge January 28, 2012 at 8:46 AM
ကျနော်လဲ ကိုမင်းမောင်ကို လက်ဆောင်ပေးဖို့အစီစဉ်ရှိပါတယ်ဗျာ motherboard , cpu , cpu fan .ram . cable. dvd(rw) harddrive .လေးတဲ့ power supply နဲ့ ပုံးအခွံဘဲ ထားခဲ့မှာပါ မြန်မာပြန်လာရင် မေးလ်ပို့လိုက်မယ်
သန်းအေး January 28, 2012 at 9:35 AM
ပြည်တော်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ..ပြန်နေတဲ့ အချိန်ဆိုဒ်ကို ဆက်ရေးမှာလားဗျာ..ပညာသင်ကြား
ရင်း တဖက်က နည်းပညာတွေ ဖြန့်ဝေပေးတဲ့အတွက် ချီးကျူးလေးစားပါတယ်..နောင်ဆက်တိုင်း နေမင်းမောင် ဆိုတဲ့
နည်းပညာဆိုဒ်လေး ထာဝရရှင်သန်တိုးတက်ပါစေဗျာ..တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်..ကျနော့်ကို photo ဖြတ် ညှပ် ကပ် လေးတစ်ခုလောက်ရမလားဗျာ..ခလေးပုံလေးတွေကိုဖြတ်ပြီး နောက်ခံ လှလှလေးတွေမှာ
ထည့် စာသားလေးတွေနဲ့လုပ်ပြီး ပုံထုတ်ချင်လို့ပါဗျာ.. လေးစားလျှက်
အသေးလေး January 28, 2012 at 10:32 AM
ကိုနေမင်းမောင် ရေ ကျွန်တော်အရင်တုန်းက ပြောထားတဲ့အတိုင်းဘဲခင်ဗျာ
ဒီဆိုက်ထဲက ဆော့ဝဲအားလုံး ဟက်ဒစ်နဲ့လာကူးမှာပါ ....
နေမင်းမောင် January 28, 2012 at 11:44 AM
ကျွန်တော်တို့ မပြန်သေးပါဘူးအစ်ကို ကိုသန့်ဇင်ဌေးပြန်မှာပါ။ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်နေမင်းမောင်ရှိနေဦးမှာပါ :)
မမေ့တတ်သူ January 28, 2012 at 4:55 PM
Thu Ra January 31, 2012 at 5:29 AM
arques May 2, 2012 at 7:05 PM
ကျေးဇူးပဲ ကိုနေမင်းရေး ကိုနေမင်းလဲဒီထက်မကအားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်................
mg June 1, 2012 at 11:43 PM
တော်သေးတာပေါ့ အစ်ကို နေမင်းမောင် ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ အစ်ကိုတို့လိုလူမျိုးတွေ ရှိမှ ကျတော်တို့လိုမသိနားမလည်တဲ့သူတွေအဖို့ အားရှိတာပေါ့ အစ်ကို တို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကို ဒီသသက်မေ့လိုရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ကျတော်တို့အစ်ကို ဆိုဒ်လေးနဲ့မတွေခင်တုံး ကဆိုဘာမှာမသိသေးဘူး အစ်ကိုဆိုဒ်လေးကိုသိသွားတော့မှာ ပဲတော်တော်လေးကိုသိသွားတယ် အစ်ကို လိုလူမျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ် အစ်ကို ကို့အမြဲလေးစားနေပါတယ် အစ်ကို......
mg June 1, 2012 at 11:45 PM
Anonymous July 22, 2012 at 6:28 AM
I can't download this links. Please, help
Mediafire Link ဖိုင်က မရှိတော့ဘူးဗျ။အဆင်ပြေရင် Links အသစ်လေးနဲ့ပြန်တင်ပါအုန်းပါလားအကို။တကယ်အသုံးဝင်လို့ ဆောင်ထားချင်လို့ပါဗျာ။